Kabtankii Cardiff Sean Morrison oo ka saaciday Liverpool guul ay baahneed xalay. Hadaba muxuu sameeye? – Somali Sounds
Kabtankii Cardiff Sean Morrison oo ka saaciday Liverpool guul ay baahneed xalay. Hadaba muxuu sameeye?
April 22, 2019 April 22, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Kulankii ay Liverpool guusha ka soo gaartay kooxda Cardiff City waxaa dhexda ugu jiray kabtanka Cardiff ee Sean Morrison kaas oo sameeyay dhacdooyin hadal hayn badan keenay. Laakiin jamaahiirta Premier league ee aan doonayn in ay Liverpool koobka ku guulaysato ayaa soo jeediyay in Sean Morrison uu kooxda Reds ka caawiyay in ay saddexda dhicbood soo heshay.
Waxaa jira dhawr dhacdo oo Sean Morrison loogu eedeeyay in uu ahaa sababta ay Liverpool u guulaysatay waxaaan lagu xidhay dhacdooyinkan hadal uu bishii October 2018 ka sheegay Liverpool taas oo la xidhiidha kooxda uu doonayay in ay koobka Premier league ku guulaysato xili ciyaareedkan.
Maxay Ahaayeen Dhacdooyinkii Uu Kabtanka Cardiff City ee Sean Morrison Uu Ka Sameeyay Kulankii Liverpool Ee Falcelinta Waalida Ah Keenay? Saddexdan arimood ayaa sal u ah iyo hadalkiisii hore.
1-Sean Morrison ayaa lagu eedeeyay in uu ahaa xidigii sababta u ahaa goolkii uu furitaanka ee Liverpool waxayna taageerayaasha xag jirka ah ee Liverpool ka soo horjeedaa ay ku doodeen in Sean Morrison uu sii daayay Gini Wijnaldium.
2- Sean Morrison ayaa helay fursad aan la rumaysan karin oo goolka Liverpool madhnaa kadib markii uu Alisson isku dayay in uu kubbad saaro laakiin Sean Morrison oo isku dayay in uu kubbada madaxa ku darbeeyo isaga oo goolka Reds u jiray 8 yards oo kaliya ayay dhabarka kaga dhacday wuxuuna lumiyay wax lagu qeexay fursad qasaarintii xili ciyaareedkan balse waxaa loo badalay in uu si ula kac ah u lumiyay.
3- Sean Morrison ayaa ahaa xidigii Mohamed Salah ku galay qaladkii rekoodhe ee Cardiff City lagu dhigay, waxaana lagu eedeeyay in uu isagu ujeedo ka lahaa maadaama oo uu dhawr jeer qalad ku galay Salah, waxayna arintani khilaafsan tahay hadalkii hore ee Salah loogu eedaynayay in uu istuuray.
Saddexdan arimood ayaa kabtanka Cardiff City loogu eedeeyay in uu Liverpool ka caawiyay guushii Cardiff City waxaana sabab u ah hadalkiisii hore ee uu ku sheegay in uu rajaynayo in Liverpool ay xili ciyaareedkan ku guulaysato koobka Premeir league.
Aan soo qaadano hadalkii Sean Morrison uu saxaafada u sheegay bishii October ee sanadkii la soo dhaafay markii ay Anfield booqashada ku tagayeen oo la waydiiyay kooxda uu xili ciyaareedkan u rajaynayo in ay koobka Premier league ku guulaysato. Wuxuu ku jawaabay Liverpool taas oo keentay shaki ah inuu sii daaye.
Shacabkii Mogadishu oo samirkii ka dhamaaday
Banaanbaxyo Rabshada wata ayaa ka dhashay Magaalada Mogadishu gaar ahaan isgoyska Howl wadaag kadib markii…
Weerarada Mogadishu ka dhaca oo xarka goostay:
March 21​, 2019 waxaa qarax gaari lagu xiray lagu dilay Isgooska KM4 Inj. Maxamed Cabdi…
Madaxweyne Muuse Biixi oo xil ka qaadis iyo xil Magacaabid sameeyay
Madaxwaynaha Somaliland oo Xil ka Qaadis iyo Magcaabis Sameeyay. Xubanaha la magcaabay waxaa ka mid…
April 14, 2019 April 14, 2019 Somali Sounds.com
kooxda Manchester United ayaa guul muhiim aheyd ka gaartay Kooxda West Ham kulan katirsanaa horyaalka Premier League natiijada kulanka ayaa ku soo dhamaaday 2-1 oo ay ku awood sheegatay Kooxda Manchester. Bilowgii hore ee ciyaarta Kooxda Manchester ayaa la hormartay gool rigoore ah waxaana u dhaliyey xidiga reer Farance ee Pogba daqiiqadii 19-aad ee ciyaarta. […]
Wiilka Ronaldinho oo ku biiray Kooxda Cruzeiro ee dalka Brazil.
April 6, 2019 April 6, 2019 Somali Sounds.com
Naadiga Cruzeiro ayaa la soo saxiixayay wiilka Halyeeygii hore ee xulka Brazil Ronaldinho ee Joao Mendes Guacho Ronaldinho. 14 sano jirkaan ayaa Kooxdaas ka tirsanaan doono ilaa 19 sano jir uu ka noqdaa. Heshiishkaan ayaa u dhaxeeyo waalidka ciyaaryahankaan iyo Kooxdiisa cusub kaas oo dhacay jimcihii shalayto aheed kadib markii ay aad ula yaabeen tayada […]
April 15, 2019 April 15, 2019 Somali Sounds.com
Xiddigii waynaa ee reer Brazil, Pele ayaa haatan xaaladdiisa caafimaad ay soo hagaagaysaa kaddib markii lagu sameeyay qalliin dhanka Kellida ah oo lagaga saaray dhagax, sida ay dhaqaatiirtu sheegeen. Pele oo 78-sano jir ah ayaa 2-dii bishan April waxaa la dhigay Isbitaal ku yaalla Faransiiska, kaddib markii uu xanuunsaday xilli uu daawanayay xiddiga Kooxda Paris […]
SHIRKA XISBIYADA & SIYAASIYIINTA SOOMAALIYA OO WAR MURTIYEED LAGA SOO SAARAY HALKAAN KA AQRISO WAR MURTIYEEDKA